Euro Rori Simulator inoramba ichivandudza nemamepu | Linux Vakapindwa muropa
Takataura nezvazvo kare kare rori kutyaira simulator pane yedu LxA blog. Ndiwo mutambo wevhidhiyo uyo waive watove weWindows uye uyo wakasvikawo muLinux nyika nekukurumidza, nekuti hazvisi nekuda kweinertia yazvino maitiro muindasitiri yemitambo kuburitsa mazita eiyo penguin chikuva, asi iyo yaive pamberi peiyi . MuStam, iyo Valve chitoro, unogona kuitenga kune akasiyana mapuratifomu, akadai seLinux, Mac uye Windows.
Zvakanaka ikozvino Euro Truck Simulator 2 inosanganisa kuwedzera kutsva iko zvino kwave kuwanikwa kubva kuchitoro ichi kunosanganisira mepu dzeItari. Saka vanoda zvekutyaira matraki uye simulation vanogona ikozvino kunakidzwa nemigwagwa mikuru, migwagwa nemigwagwa yeItaly sechinhu chitsva izvo zvino zvinounza SCS Software, timu yekusimudzira yanga ichitarisira iri basa nemutambo wevhidhiyo pachawo. Nenzira iyi iwe unenge uine zvakawanda zvirimo kune vese varidzi kune Euro Rori Simulator varidzi.
Kana uchifarira tora mutambo wevhidhiyo Uye hauna izvozvi, kana kana iwe uchitova nazvo asi uchida zvemukati zvitsva, zvave kutowanikwa kubva kune inoenderana peji mune iyo Steam chitoro sezvandambotaura kare. Kana iwe ukawana peji ino, iwe uchave unokwanisa kutsvaga akakurumbira mapakeji uye zvakaderedzwa izvo zvinowanzo kuve zviripo mune ino yepamhepo vhidhiyo yemitambo chitoro, kuwedzera kune izvo zvirimo zvemamepu eItaly uye zvimwe zvinowedzera zviripo zvemusoro uno.
Unotoziva kuti Euro Rori Simulator, sezita zvarinoratidzira, rinotarisa kuEuropean kondinendi yemamishinari, ne europe mepu. Iwe unozogona kusarudza pakati pemarori akasiyana uye nemitoro yekuendesa kunzvimbo kwaunotumwa neumwe neumwe mishoni. Iwe zvakare une mukana wevazhinji vatambi mutambo wekutamba nevamwe pane network uye mukana wekuhaya vatyairi kuti vakushandire iwe. Uyezve ma mods anogona kugadzirisa maficha emutambo wevhidhiyo, senge yekuwedzera matrailer, marori matsva, matori emukati mune zvakadzama, zvikamu zvakagadziridzwa, mepu, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Euro Rori Simulator inoramba ichivandudza nemamepu